Maxa iska badelay saadaashii AFCON? - BBC News Somali
Maxa iska badelay saadaashii AFCON?
3 Febraayo 2015
Saadaasha ah in Ivory Coast iyo Ghana ay soo gaari karaan nus dhammaadka koobka Qaramada Afrika ayaa laga yaabaa inay aheyd xog ogaalnimo dahsoon oo ay mucaashaqiinta kubadda cagta sii mala awaalayeen ka hor inta aanu tartankan bilaaban.
Hasayeeshee, ma aanu jirin qof doorbidayay inuu saadaaliyo in Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo iyo Equatorial Guinea ay ku biiri karaan kooxaha miisaanka ku leh kubadda cagta oo ay nusdhamaadka tartanka soo gaari karaan, gaar ahaan weliba kooxda tartankan martigalinaysa.
Kooxdan ayaa laga saaray isreebreebka tartankan bishii July ee sanadkii tagay, kaddib markii ay garoonka soo galiyeen ciyaaryahan aan la ogaleyn inuu u dheelo, waxayna marka horaba tartankan kaga qeyb galayaan inay aqbaleen inay waqti kooban ku martigaliyaan ciyaaryahan.
Kooxdan ayaa Sabtidii guushii ugu weynayd ee ciyaaraha waxa ay ka gaartay kooxda Tuuniisiya ee ka midka ah kooxaha aan dhinacooda dhulka la dhigi karin ciyaaraha Qaramada Afrika oo si uu muran ku jiro ayey 2-1 kaga badiyeen.
Kooxda Tuuniisiya ayaa ku hogaaminaysay ciyaarta 1-0 oo goolhayahooda ayaa 90-kii daqiiqa ee loogu talagalay ciyaarta waxaa u tagay hal kubad oo kaliya, ilaa markii dambe uu garsooraha ciyaarta ka dhigay gool kulaad aanay cidna filayn, halkaana lagu barbareeyay, oo waqti dheeraad ahna lagu daray ciyaartii.
Durbadiiba waxaa soo baxay niyadjab iyo jahawareer ay Tuuniyiinta ka qaadeen garsooraha iyo ciyaartoyda Equatorial Guinea, halkaana waxaa ka bilowday isriixriix iyo gacmo isku tag.
Waxaa kaaga sii daran markii uu seeriga ku dhawaaqay garsooraha ayaa waxaa mar qura ku yaacay ciyaartoyda Aljeeriya oo cannaan iyo gacmo taag ku bilaabay garsooraha kaddib loo baahday in booliska ay arrinta soo faragaliyaan.
Waana arrin aanan laga filayn koox weyn sida Tuuniisiya oo kale ah inay sameyso.
Balse kooxda Equatorial Guinea ayaanan ku aadin koox jilicsan oo waxa ay ka hortagaysaa kooxda Xidigaha Madmadow ee Ghana, oo jiilkooda casriga ah ay ku soo barbarteen kooxda Guinea, oo ay 3-0 kaga soo badiyeen.
Waxaa kaloo layaab lahayd sida ay kooxda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo uga soo kabsatay 2 gool oo ay Congo ku yeelatay, oo intey 4 gool ugu badashay halkan ku soo gaartay, balse midaa makala hortegi karaan kooxda Ivory Coast oo kooxdii tartankan loo saadaalinayay ee Aljeeriya si fiican uga soo adkaatay?
Tartankanse ma isugu soo hari doonaan labada kooxood oo ay inta badan dadka jecel ciyaaraha ay doorbidayaan?